मोदीले एस्तो संदेश दिएर पठाउदै छन ओलीको लागि सुष्मा स्वराजलाइ!ओलीले के पठाऊलान कोशेली ? – नेपाली सूर्य
January 30, 2018 January 30, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on मोदीले एस्तो संदेश दिएर पठाउदै छन ओलीको लागि सुष्मा स्वराजलाइ!ओलीले के पठाऊलान कोशेली ?
काठमाडौं। भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सन्देश लिएर काठमाडौं आउने भएकी छिन् ।
विदेशमन्त्री स्वराज आकस्मिकरुपमा नेपाल भ्रमणमा आउने भएपछि अहिले काठमाडौंको राजनीति तातेको छ । उनी विहीबार (१८ माघ) नेपाल आउन लागेकी हुन । एक दिने नेपाल बसाईपछि उनी माघ १९ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
यही पेरिफेरिमा मोदीले विदेशमन्त्री स्वराजलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउन लागेका हुन् । स्वराजले मोदीको विशेष सन्देश बोकेर आउने भारतीय उच्च अधिकारीको दाबी छ । enepalpost बाट
बलात्कारीसँग पैसा लिएर पीडितको बयान नलिने इन्सपेक्टर ठकुरी हिरासतमा
केरासँगै तातो पानी पिउँदा यस्तो फाईदा ? जानी राखौं
ओलीलाई नेपालको काउन्टर जवाफ : कसैको प्रालिको सम्पत्ति हामी लिँदैनौ, पार्टीको सम्पत्ति हाम्रै हो
December 25, 2020 December 25, 2020 Nepali Surya